Ukusebenza Kwenkampani - Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
1.100×104 m3/d isitshalo se-skid-mounted decarbonization se-CNPC
Le phrojekthi iyimodeli yokwelashwa kwegesi yemvelo ephezulu enekhabhoni, futhi iyimodeli yesizinda sikawoyela sase-Daqing esaqala ukusebenzisa i-module skid efakwe, yaklanywa futhi yathengwa ngonyaka owodwa, futhi yakhiqizwa futhi yaqala ukusebenza eNyakatho-mpumalanga yeChina.
Futhi kuwukuhlola kwethu ekukhuthazeni iphrojekthi ye-EPC, futhi kuzoba yinguquko ebalulekile enkampanini ukuxhuma isixhumanisi phakathi kokwandulelayo nokulandelayo kuphrojekthi yobunjiniyela ye-EPC.
2. 300×104 m3/d desulfurization skid-mounted plant ye-CNPC
Igesi yemvelo, ngemva kokuhwamuka kwe-flash ku-MDEA uketshezi olucebile, isuswa i-H2S ngesihlukanisi samanzi esine-asidi, futhi isixazululo esihlukanisiwe se-MDEA siphinde siphonselwe embhoshongweni we-desulfurization.
Isixazululo esicebile se-TEG esisetshenziswa embhoshongweni wokukhipha amanzi emzimbeni singena embhoshongweni wokukhipha amanzi emzimbeni, ethangini lokuhwamuka kwe-flash nesihlungi bese siyashisisa bese senziwa kabusha sibe yisixazululo se-TEG esithambile. Bese iphonswa embhoshongweni wokukhipha amanzi emzimbeni ukuze ijikeleze ukuphelelwa amanzi emzimbeni.
Ngemva kokuba igesi ye-H2S ehlukaniswe isihlukanisi samanzi ane-asidi ijovwe ethangini lokugcina igesi ene-asidi, ishiswa ngaphambili yisithando somlilo esisabelayo, isabela ngomoya omuncwa yi-compressor yomoya ukuze ikhiqize i-SO2.
I-SO2 isabela ne-H2S esele (i-Claus reaction) ukuze ikhiqize i-elemental sulphur, ebese ipholiswa ukuze kutholwe isulfure.
Igesi yokuphakelayo, ngemva kokususwa kokungcola kwayo okuqinile noketshezi ngesihlukanisi nesihlungi, ingena embhoshongweni wevalve yokuntanta ukuze i-desulfurization, umbhoshongo osebenzisa isixazululo se-MDEA njenge-desulfurizer.
Igesi ephuma phezulu kombhoshongo wevalvu entantayo idlula kusihlukanisi sokuhlanza okumanzi ukuze ikhiphe uketshezi oluncane lwe-MDEA olufakwe kugesi, bese igesi yemvelo emanzi ingena embhoshongweni wokukhipha amanzi emzimbeni ukuze ikhiphe amanzi nge-TEG.
Ekugcineni, igesi yemvelo eyomile evela embhoshongweni wokuphelelwa amanzi emzimbeni ithunyelwa kwamanye amazwe njengegesi yokuhweba efanelekile.
Uketshezi olucebile lwe-MDEA embhoshongweni we-desulfurization luyahwamuka ukuze kukhishwe ama-hydrocarbons futhi lufake isihlungi ukuze sihlungwe. Ngemva kwalokho, ingena embhoshongweni wokuvuselela futhi ishiswa isitimu ukuze iphinde ikhiqize uketshezi olubi lwe-MDEA, oluphonswa embhoshongweni we-desulfurization ukuze kuzuzwe i-desulfurization.
3. 120×104 m3/d isitshalo se-crystallization evaporation se-CNPC
Okuphakelayo kwesitshalo sekristalu yokuhwamuka kwamanzi amanzi anosawoti aphuma esikhungweni se-electrodialysis esikhuphuka nomfudlana, futhi amandla okwelapha esitshalo angama-300 m3/d. Isikhathi sokukhiqiza saminyaka yonke amahora angu-8000, futhi idatha yokuklama eyisisekelo imi kanje:
(1) izimo zokungena kwamanzi anosawoti
Ukugeleza: 300 m3/d
ingcindezi: 0.4 ~ 0.45MPa (g)
Izinga lokushisa: 20 ~ 50 °C
Umthombo wamanzi anosawoti: amanzi anosawoti agxilile akhiqizwa yi-electrodialysis, indle ejwayelekile ngemuva kokwelashwa kwamakhemikhali ezinto eziphilayo.
(2) izimo zomkhiqizo ngaphandle kwesitshalo
Ingcindezi: 0.25-0.27 Mpa (g)
Izinga lokushisa: ~ 40 °C
Okuqinile: 0.25 t/h
4. 150-300×104 m3/d i-TEG dehydration plant ye-CNPC
Inkampani yethu yakha isikhungo sokuqeda amanzi emzimbeni i-Wei 202 kanye ne-204 TEG enamandla okwelapha angu-300×104 m3/d kanye nephrojekthi yesikhungo sokuqeda amanzi emzimbeni we-Ning 201 TEG enamandla okwelapha angu-150 ×104 m3/d.
Inqubo yesitshalo sokukhipha amanzi emzimbeni ye-TEG ivamise ukusetshenziselwa ukwelapha igesi yemvelo engenaso isibabule noma igesi ehlanziwe evela esitshalweni se-alcohol amine process desulfurization. Iyunithi yokuphelelwa amanzi emzimbeni ye-TEG ikakhulukazi yakhiwe isistimu yokumunca kanye nesistimu yokuvuselela. Imishini eyinhloko yenqubo iwumbhoshongo wokumunca. Inqubo yokuqeda amanzi emzimbeni yegesi yemvelo iqedwa embhoshongweni wokumuncwa, futhi umbhoshongo wokuvuselela uqedela ukuvuselelwa koketshezi olucebile lwe-TEG.
Igesi yemvelo ephakelayo ingena isuka phansi kombhoshongo wokumuncwa, bese ixhumana ngokuphambene noketshezi oluthambile lwe-TEG olungena lusuka phezulu luye embhoshongweni, bese igesi yemvelo ephelelwe amanzi isuka phezulu kombhoshongo wokumuncwa, bese kuphuma uketshezi olucebile lwe-TEG. phansi kombhoshongo.
Ngemva kwalokho, uketshezi olucebile lwe-TEG lungena ku-flash tank ukuze lukhanyise amagesi e-hydrocarbon ancibilike ngangokunokwenzeka, ngemva kokushisisa ngepayipi lokukhipha le-condenser phezulu kombhoshongo wokuvuselela. Isigaba esiwuketshezi esishiya ithange le-flash sigelezela kusishintshi sokushisa esiwuketshezi esicebile esinothile kanye nethangi le-buffer ngemva kokuhlungwa yisihlungi, bese singena embhoshongweni wokukhiqiza kabusha ngemva kokushisisa okwengeziwe.
Embhoshongweni wokuvuselela, amanzi akuketshezi olucebile lwe-TEG ayasuswa nakuba eshiswa ngaphansi kwengcindezi ephansi kanye nezinga lokushisa eliphezulu. Uketshezi olukhiqizwa kabusha lwe-TEG oluthambile lupholiswa isishintshi sokushisa esinoketshezi olucebile futhi luphonswe phezulu kombhoshongo wokumuncwa yiphampu ye-glycol ukuze igaywe kabusha.
5. 30×104 m3/d isitshalo se-molecular sieve dehydration se-CNPC
Umthamo wokwelapha :14 ~ 29 × 10 m3/d
Ingcindezi yokusebenza: 3.25 ~ 3.65mpa (g)
Izinga lokushisa lokungena: 15 ~ 30 ℃
Okuqukethwe kwamanzi kwegesi yokudla: 15-30°C amanzi agcwele
Ingcindezi yokuklama: 4MPa
I-feed gas yale phrojekthi igesi yemvelo enokuqukethwe okuphezulu kwe-CO2 evela ku-Lian 21 block kanye ne-Lian 4 block e-Fushan oilfield, esifundazweni sase-Hainan. Esigabeni sokuqala nesimaphakathi sokuhlolwa komshayeli, igesi ekhiqiziwe evela kula mabhulokhi amabili okokuqala yenziwa ukuhlukaniswa kwegesi kawoyela esiteshini sokuqoqa igesi sase-Bailian, ngokulandelayo yomiswa futhi yaphelelwa amanzi ngenxa ye-skid ye-molecular sieve dehydration, yase yacindezelwa ku-14 ukuze 22 MPa nge-compressor yomjovo wegesi futhi ifakwe emhlabathini.
6. 100×104 m3/d isitshalo sokwamukela i-LNG se-Qasim port, Pakistan
Le phrojekthi yakhelwe futhi yakhiwe ngokuvumelana ne-American Standard. Isikhungo sokwelapha i-LNG kanye nomkhumbi wezokuthutha we-LNG uletha i-LNG emkhunjini ontantayo we-LNG (iyunithi yesitoreji neyokubuyisela kabusha) eduze ne-FOTCO Wharf.
Indawo entsha yokuthulula igesi kanye nepayipi kuzokwakhiwa ukuze kuthuthwe igesi yemvelo ephinde yahluzwa kabusha isuka emkhunjini ontantayo we-LNG iye endaweni yokuxhuma ye-SSGC, elungele ukulethwa kubasebenzisi esikhathini esizayo.
Indawo yokwakha: Ichweba lesibili ngobukhulu ePakistan, ichweba laseRath Qasim. Itholakala ezindaweni eziphansi zoMfula iFitigli, igatsha elingasentshonalanga ye-Indus River Delta eningizimu yezwe. Inyakatho-ntshonalanga yayo iqhele ngamakhilomitha ayi-13 ukusuka eKarachi. Iyichweba lesibili ngobukhulu ePakistan. Isebenzela kakhulu izigayo zensimbi ze-Karachi kanye nezimpahla zasekhaya nezithunyelwa ngaphandle, ukuze kwehliswe ingcindezi ku-Karachi Port.
Amandla okwelapha: 50 ~ 750 MMSFD.
Ingcindezi yokuklama: 1450 PSIG
Ingcindezi yokusebenza: 943 ~ 1305 PSIG
Izinga lokushisa lokuklama: -30 ~ 50 °C
Izinga lokushisa lokusebenza: 20 ~ 26°C
7. 50×104 m3/d isitshalo se-LNG se-liquefaction edolobheni laseDatong, esifundazweni saseShanxi
Iphrojekthi ye-Shanxi Datong LNG ingelinye lamaphrojekthi abalulekile wamandla amasha esiFundazweni sase-Shanxi futhi iwuhlelo olubalulekile lokugqugquzela ukufakwa kwegesi esiFundazweni saseShanxi. Lapho iphrojekthi isiqediwe, okuphumayo kuzofinyelela
Njengesinye sezikhungo eziphakeme kakhulu zokulondoloza i-Shanxi LNG, ukuphuma kwayo kuzofinyelela ku-50x104 m3/d.
Lo msebenzi uzokwakha iphrojekthi yokuncibilikisa igesi yemvelo engama-50×104 m3/d kanye nezinsiza ezisekelayo kanye nethangi eligcwele umthamo we-10000 m3 LNG. Amayunithi enqubo eyinhloko ahlanganisa i-feed gas pressurization, i-decarbonization unit, i-decarbonization unit, i-dehydration unit, ukususwa kwe-mercury nokususwa kwesisindo, iyunithi ye-hydrocarbon, iyunithi ye-liquefaction, isitoreji sefriji, i-flash steam pressurization, ipulazi le-LNG ithangi kanye nezindawo zokulayisha.
8.30×104 m3/d isitshalo se-desulphurization se-CNPC
Iphrojekthi esekelayo yesikhungo sokukhipha i-skid mounted desulfurization yemithombo yegesi yasolwandle esiFundazweni saseWestern Sichuan, i-skid yokuhlanza igesi yemvelo, iphrojekthi yokuqala inkampani yethu esebenzisana nayo ne-Sinopec Petroleum Engineering Design Co., Ltd.;
Le phrojekthi iwumsebenzi osekelayo wegesi yemvelo desulfurization ene-0.3 100×104 m3/d emthonjeni wase-Pengzhou 1, okuhlanganisa ukushushuluza kwegesi yemvelo, ukubuyiswa kwesibabule nokubumba, ubunjiniyela bomphakathi namanye amayunithi.
9. 120×104 m3/d indawo yokwelapha igesi yomsila ye-CNPC
Umnikazi: I-CPE ye-Southwest Design Institute
Okuphakathi: I-Claus tail gas, i-TEG waste gas, liquid sulfur pool waste gas
Amandla okwelapha: 120x104 Nm3/d
Ingcindezi yokungena: 37kpa (g)
Izinga lokushisa lokungena: 170 °C
Ukugeleza kokungena: 52k mol/h
Okuqukethwe kwe-CO2: 23.3222 g/ m3
Okuqukethwe kwe-SO2: 0.4609 g/ m3
Le sethi yesikhungo sokuhlanza igesi yomsila isetshenziswa kakhulu ukwelapha igesi kaClaus yomsila kanye negesi ewuketshezi yesulphur pool evela embonini yokukhipha isibabule esikhungweni sokubuyisela isibabule kanye nokwelapha igesi yemfucuza ye-TEG evela embonini yokuqeda amanzi emzimbeni. Umthamo wokucubungula umklamo wesikhungo ufaniswe nalawo wesikhungo sokuvuselela isibabule kanye nesikhungo sokuqeda amanzi emzimbeni.
Lesi sikhungo samukela inqubo ye-CANSOLV egunyazwe inkampani yakwaShell, futhi igesi yomsila ngemva kokwelashwa ingafinyelela izinga lokukhishwa kwe-SO2 lika-400mg/Nm3 (isisekelo esomile, 3vol% O2). Isikhathi sokukhiqiza sonyaka sesitshalo singu-8000h, futhi ukuguquguquka kokusebenza kungu-50% ~ 120%.
10. 600×104 m3/d indawo yokwelapha igesi yomsila ye-CNPC
Le phrojekthi iyunithi yokwelapha igesi yomsila enamandla okuklama angu-600 × 104 m3/d endaweni yokuhlanza i-CNPC Gaomo. Isetshenziswa kakhulu ukwelapha igesi yakwaClaus yeyunithi yokubuyisela isibabule, kanye negesi yemfucumfucu ye-sulphur pool yeyunithi yokutholwa kwesibabule kanye ne-TEG waste gas of dehydration unit. Umthamo wokwelapha wokuklama weyunithi uhambisana neyunithi yokubuyisela isibabule kanye neyunithi yokuphelelwa amanzi emzimbeni. Lesi sikhungo samukela inqubo ye-CANSOLV egunyazwe inkampani yakwaShell futhi igesi yomsila ngemva kokwelashwa ingafinyelela izinga lokukhishwa kwe-SO2 lika-400mg/Nm3 (isisekelo esomile, 3vol% SO2).
11. 600×104 m3/d isitshalo se-crystallization evaporation se-CNPC
Lesi sitshalo sisebenzisa indlela yokuhwamuka esebenza kaningi kanye nendlela yokufingqa ukwelapha amanzi anosawoti. Amanzi akhiqiziwe aphathwa ngeyunithi ye-evaporation crystallization asetshenziswa kabusha njengamanzi okwakheka ukuze ajikeleze amanzi okupholisa, noma njengamanye amanzi okukhiqiza esitshalweni. Izinto ezingcolisayo zihlukaniswa nendle ngendlela kasawoti oyikristalu. Okuphakelayo kwesitshalo sekristalu yokuhwamuka kwamanzi amanzi anosawoti aphuma esikhungweni se-electrodialysis esikhuphuka nomfudlana, futhi amandla okwelapha esitshalo angama-300 m3/d. Isikhathi sokukhiqiza saminyaka yonke amahora angu-8,000.
Ukuhwamuka okusebenzayo okuningi kuyamukelwa ukuze kubonwe ukusetshenziswa kwamandla okuhamba kancane futhi umphumela wokonga uyabonakala.
Ukushisa kwemfucuza yesistimu yonke kusetshenziswe ngokugcwele. Iyunithi ye-evaporation crystallization idinga kuphela inani elincane lamandla okushisa ezinga eliphezulu ukuze ibone ukuthi akukho kukhishwa kwendle embonini yokuhlanza igesi yemvelo.
Umphumela wokwelapha muhle, futhi amanzi ahlanzekile angahlangabezana nezinga lamanzi ajikelezayo, ngakho-ke angasetshenziswa njengamanzi okuzenzela ukuze ajikeleze amanzi.
Ishubhu yokushintshanisa ukushisa yenziwe ngezinto ze-titanium ezinokusebenza kahle kokudlulisa ukushisa. Ezinye izisetshenziswa eziyinhloko zamukela ipuleti eliyinhlanganisela engu-316L, elisebenza ngokuzinzile, izinga eliphezulu lokuzenzakalela, ukusebenza okulula kanye nobubanzi bohlelo lokusebenza.
12. 240 m3/d Imboni edidiyelwe yokuthutha uwoyela negesi yendawo kawoyela yaseYumen
Le phrojekthi itholakala eHuanfu block, eLongdong, Yumen Oilfield.
Impahla ekhishiwe emthonjeni kawoyela (amanzi angahluziwe aphethe uwoyela negesi) ingena endaweni yokushisisa yesitshalo ukuze ifudunyezwe ibe ngu-45℃ ngemva kokuthola ibhola nokugcwaliswa umthamo. Ngemuva kokushisa, ingxenye yayo ihanjiswa ngepompo yokuthutha ehlanganisiwe, kanti enye ingxenye ingena esigabeni sokuhlukanisa ukuhlukaniswa kwe-gas-liquid. Igesi ehlukanisiwe isetshenziswa njengempahla yokushisisa ngemva kokwelashwa endaweni yokubuyisela i-condensate, futhi isigaba soketshezi esihlukanisiwe sithuthwa siphume ngephampu yokuthutha exubile.
Amandla okwelapha: 240 m3/d
Ingcindezi yokusebenza: 0.35Mpa(g)
Ingcindezi yokuklama: 0.8MPa
Umswakama wokungena: 5 ~ 25°C
Umswakama wokukhipha: 40 ~ 50°C
Umswakama womklamo: 60°C
Okuqukethwe kwamanzi oketshezi olungenayo: 50%
13. 30×104 m3/d i-LNG liquefaction plant edolobheni laseCangxi
Itshalwe yiCangxi Datong Natural Gas Investment Co., Ltd. Ngezigidi ezingu-170 zamayuan, le phrojekthi izokwakha iphrojekthi yokuncibilikisa i-LNG engu-300×104 m3/d kanye nezinsiza ezisekelayo kanye nethangi eligcwele elingu-5000 m3 LNG.
Inqubo yesiqandisi ye-MRC iyamukelwa, futhi izitshalo zenqubo eyinhloko zihlanganisa iyunithi yokucindezela igesi eluhlaza, iyunithi ye-decarburization kanye neyunithi yokuphelelwa amandla kwamanzi, ukususwa kwe-mercury kanye neyunithi yokususwa kwe-hydrocarbon esindayo, i-liquefaction unit, isitoreji sefriji, i-flash vapor pressurization,
Indawo yethangi le-LNG nezindawo zokulayisha.
Amandla: 30×104 m3/d
Ingcindezi yokusebenza: 5.0 MPa (g)
Ukucindezela kwedizayini: 5.5 Mpa (g)
Ithangi lesitoreji: 5000m3 ithangi eligcwele umthamo
Izinga lokushisa lesitoreji: -162°C
Ingcindezi yesitoreji: 15KPa